Teny nitaingina 11 avy amin'ny Lahatra Zero Hanentanana anao - Hafa
Teny mahavariana mahavariana 11 avy amin'ny Fate Zero Anime
Efa nahatsapa hoe manao ahoana ny fanananao mpanoro hevitra anao manokana, na olona iray tadiavinao?
Izany no karazana toetra sy toetra Rider dia avy amin'ny Fate Zero.
Tsy vitan'ny hoe mahafinaritra ny miaraka sy tia mihomehy be izy. Mamporisika ireo manodidina azy izy ary manohana Waiver Vvett amin'ny alàlan'ny teny fahendrena sy torohevitra.
Ary ireo toetra ireo no mahatonga ny mpitaingina mpitaingina mendrika holazaina.
Raha mitady fatra aingam-panahy sy fahatezerana ianao dia zahao ireo Fanononana 11 mpitaingina avy amin'ny Fate Zero!
“Any ankoatry ny faravodilanitra ny voninahitra. Fanamby izany satria tsy tratra. Miresaka fandresena ary asehoy izany. ” - Rider
“Ory aho ka hitomany. Fa tsy hanenina mihitsy aho. ” - Rider
'Ny maha-ambany anao dia ny hatsaran'ny mpanjaka. Mety himenomenona be ianao, saingy fantatrao fa bitika ianao. Nefa mbola sahirana ihany ianao hahatratra ny avo kokoa noho izay azonao eritreretina. ” - Rider
“Heveriko fa ny fanananao ny anaranao voarakitra ao amin'ny boky tantara dia endrika tsy mety maty. Fa raha midika fotsiny izany fa nesorina nandritra ny roa arivo taona ny anaranao fa tsy zavatra hafa, dia aleoko nanampy na dia ny zato aza nanampy ny fiainako tena izy. ' - Rider
Sa tsy isika rehetra, sa tsy izany?
«Mba handresy, fa tsy handrava; handresy, fa tsy hanala baraka: Izany no tena fandresena! ” - Rider
“Na inona na inona ataonao dia mankafiza fatratra. Izany no tsiambaratelon'ny fiainana. ” - Rider
Teny nalaina ankafizin'ny Riders.
“Lehilahy sahy mitaingina ady eo anilako ihany no ho Tompoko. Ny kanosa tsy manana herim-po hanehoana ny tenany akory dia tsy misy toerana mendrika hahatongavana! ” - Rider
'Aza mamely ny fahavalo raha vao fantatrao ny misy azy ireo, ary ho tara loatra ianao ka hanenina noho ny tsy nahitanao ny vintana.' - Rider
Raha tsy manilika ny ramanavy ianao dia tsy hahazo ny fitokonanao mihitsy.
'Fampiasana fomba tsotra hanatanterahana zavatra manaitra, lavitra be ny fampiasa ny fomba sarotra hahazoana izany zavatra izany.' - Rider
'Rehefa mahita fomba fiaina tena afaka hireharehanao ianao indray andro any, dia terena ho amin'ny adinao manokana na tianao izany na tsia.' - Rider
Iray amin'ireo mpitaingina mpitaingina fiara miady hevitra indrindra.
#iraika ambin'ny folo
“Ny mpanjaka dia tsy maintsy miaina fiainana mazava kokoa noho ny hafa ary tokony ho mendrika ho an'ny rehetra! Ny mpanjaka no manangona ny fitsiriritan'ny maherifony rehetra ary mijoro ho mpitarika azy ireo! ” - Rider
Ary farany ny mpitaingin-tsoavaly farany nalaina avy amin'ny Fate Zero Anime andiany.
Zarao amin'ny tambajotra sosialy ny teny notsongainao.
Azonao atao ny manamarina lahatsoratra mifandraika bebe kokoa etsy ambany.